Iitattoo zeentyatyambo kwiqatha | Ukuzoba
Iitattoo zeentyatyambo kwiqatha
Susana Garcia | | Iitattoo zeqatha
La Indawo yeqatha yinxalenye ebuthathaka kwaye kuyo unokubeka iitattoo ezintle ezibonakala zintle kakhulu, nangona zingazukuba nkulu kakhulu kwaye kufuneka zilungelelaniswe neemilo zeqatha. Sinezimvo ezahlukeneyo ngale ndawo yomzimba, kodwa ngeli xesha siza kuthetha ngetattoos zeentyatyambo, eziqhelekileyo, ngakumbi kwabasetyhini.
Los Iitattoo zeentyatyambo emaqatheni Zibukeka zintle kwaye iintyatyambo ziinkcukacha ezinokuthi zifanekise izinto ezininzi, nangona zihlala zikhethwe ngexabiso lazo lobuhle. Siza kukunika iingcamango ezinkulu ze tattoo kule ndawo yomzimba. Iintyatyambo ziinkcukacha ezingaze ziphume ngesitayile, ke yimpumelelo eqinisekileyo.
1 Iitattoo zikaRose
2 Iitattoos kwindawo yangasemva
3 Iitattoo zombala
4 Iitatto ezinamagama
5 Iiloto zeentyatyambo zeLotus
6 Iitattoo ezinkulu zeentyatyambo
7 Iitatto ezinemilo
8 I tattoo yesongo
Iiroses yenye yeentyatyambo ezisetyenziswa kakhulu kwiitattoos. Umqondiso wobuhle kunye nomnqweno, ziintyatyambo ezizithanda kakhulu. Kungenxa yoko le nto zinokubonwa kwiiTattoos ezininzi. Ezi ntyatyambo zinokufakwa kwiitattoos ezincinci kwindawo yamaqatha, zenza iinkcukacha ezibuthathaka kakhulu nezobufazi. Ngokuqinisekileyo yenye yeentando zethu. Zijongeka zilungile zombini kumnyama nakwimibala ebomvu ebomvu enika olo thando luthandayo oluthanda kakhulu malunga neeroses ezibomvu, uphawu lothando.
Iitattoos kwindawo yangasemva
La indawo yangasemva yamaqatha Yindawo entle yokufumana i-tattoo edibeneyo eyongeza ukubamba okuncinci. Ngale ngqiqo iintyatyambo zilungile, ngeziqu zazo ezinde eziphakama ziye emlenzeni. Kule meko sibona isityalo esincinci esineentyatyambo ezintle kunye neentyatyambo ezilula okanye iiroses ngemibala eyahlukeneyo eguqulweyo. Ezi ntyatyambo zibonisa ukukhula komntu ekufezekiseni. Imizekelo emibini yeetatoo ezigqibeleleyo zeli candelo.
Iitattoo zeentyatyambo zihlala zenziwa ngombala, kuba iintyatyambo zininzi kwaye kakhulu imibala emihle ofuna ukuyifumana. Ngaphezu koko, kukho iintyatyambo ezineempawu ezithile, ezinje ngee poppies okanye i lavender, eziyinxalenye yempawu zazo. Ezi tatoo zineethoni ezithambileyo zihle kakhulu kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, ngaphandle kokuba ziinkcukacha ezincinci, zibetha iithoni zazo. Ke ngoku ucinga ukwenza umvambo ngemibala inokuba ngumbono omkhulu.
Yiyo umbono wangoku kwaye oqhelekileyo. Iintyatyambo ezincinci ezinxulunyaniswa namagama alula abalulekileyo kuloo mntu ufumana itattoo. Olu luvo oluthandwa ngabantu abaninzi, kuba eli gama lifanekisela into elisichazayo kwaye elinentsingiselo kuthi, longezwa kwintyatyambo entle enenkcukacha ethe-ethe negqibeleleyo.
Iiloto zeentyatyambo zeLotus
La Intyatyambo yelotus Ayizizo zonke iintyatyambo, kuba ingumfuziselo wobuBhuda othetha ngobulumko nokukhanyiselwa. Oku kunokuba ngumvambo ogqibeleleyo wendawo yeqatha. Ukongeza, zininzi iindlela zokuwufaka, ngeenkcukacha okanye ngendlela encinci kakhulu.
Iitattoo ezinkulu zeentyatyambo
Ukufumana itattoo yentyatyambo akufuneki kube kuncinci kwaye kubuthathaka. Sinokwenza kwakhona ubume obuhle kwi tattoo egcwele iintyatyambo, imibala kunye neenkcukacha. Kule ndawo kukho indawo encinci ukuze umvambo ungandiswa ukuya phezulu ukuze wenze isiqwenga esikhulu kwaye sihle.
Kwezi tattoos zincinci zisebenzisa iintyatyambo kodwa yenza ezinye iimilo. Umzekelo, i-crescent entle okanye indlovu. Ngaphandle kwamathandabuzo, iikhonsepthi ezininzi zinokudityaniswa ukwenza iitatoo ezikhethekileyo.
Siphela ngombono omkhulu kwindawo yeqatha nakwindawo yesihlahla. Sebenzisa ezi ntyatyambo ukwenza isongo ejikeleze iqatha. Umbono ohombisa kakhulu kwaye mhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitattoos zivuliwe » Iitattoo zeqatha » Iitattoo zeentyatyambo kwiqatha
Iitattoo zamafu, ingqokelela yoyilo kunye nemibono